Momba anay - FuJian JinJiang Ruchun Shoes Co., Ltd.
FuJian JinJiang Ruchun Shoes Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2013 ary hita ao Quanzhou, faritanin'i FuJian, mitontaly faritra 9600 metatra toradroa ary manana mpiasa 300 mahery. Izahay dia mpanamboatra kiraro matihanina manokana izay kiraro fanatanjahan-tena kiraro, fanatanjahantena miaraka amina endrika maoderina ho an'ny lehilahy, vehivavy ary ankizy. Manana fitaovana famokarana efa ela isika, fahaizan'ny R&D tsy miankina ary ekipa QC matanjaka. Manana fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'ny mpivarotra sy mpivarotra sy varotra maneran-tany maro. Ireo marika malaza narahinay niara-niasa dia toa ny FILA, POLO Etazonia, PIERRE CARDIN, AUSTRILIAN, KAPPA, AIRWALK, DUCATI, CHAMPION, UMBRO, sns. Ny kiraro namboarinay sy nanondrana anay teny ambony sambo dia manodidina ny 1.8 tapitrisa tsiroaroa isan-taona.
Izahay dia manaiky ny OEM baiko ary afaka manao santionany maimaimpoana arakaraka ny takian'ny mpividy. Ny kiraro rehetra dia amboarina mifanaraka amin'ny fenitra amerikana sy Eropa. Narahinay foana ny fotokevitra momba ny fanomezana kiraro avo indrindra amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo fitaovana vita amin'ny kalitao tsara sy ny fizotran'ny famokarana manara-penitra miaraka amin'ny teknolojia feno traikefa eo ambanin'ny rafitra fanamafisana ny kalitao feno. Afaka manome toky anao izahay momba ny kalitao tsara, ny vidiny mifaninana, ny serivisy tsara sy ny fanaterana haingana eo amin'ny fitovian-jo sy ny tombontsoa miaraka! Manampy anao ireo mpanjifa vaovao sy taloha hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa!
Trano fitotoana ahitra
Famindrana trano fitehirizana
Mamolavola sy ataovy modely maimaimpoana arak'izay ilain'ny mpanjifa. Afaka manapa-kevitra ny logo ianao, ny lokony, ny modely, ny fitaovana sy ny sisa. Isika koa dia mamolavola entana vaovao isam-bolana mba hofidian'ny mpanjifanay mba hiantohana ny fitehirizam-bolan'ny mpivarotra hafanana vaovao.
Ataovy ny famokarana araka ny fanamafisana santionany sy ny takian'ny mpanjifa. Izahay dia manana fenitra hentitra amin'ny fitaovana mazoto ary hanohy fanaraha-maso in-6 mandritra ny famokarana faobe mba hahazoana antoka fa tsara ny kiraro rehetra amin'ny kalitao tsara. Faly koa izahay miara-miasa amin'ny mpanjifa hanao fanadinana orinasa izay ilain'ny mpanjifa sy manao fitsirihana kiraro izay takian'ny mpanjifa. Ny fotoam-pamokarana mahazatra dia ny 35-60 andro.
Fandefasana boky miaraka amin'ny mpampihatra voatendry na ny mpizara anay niara-niasa tamin'ny 2 ka hatramin'ny 3 herinandro talohan'ny datin'ny fandefasana mba hiantohana ny fanaterana azy ireo tsindraindray. Alohan'ny hametahana fitoeran-javatra ao amin'ny tranobenay, hodinihintsika ny boaty mba hahazoana antoka fa madio sy maina izy ireo. Ary tanteno ny baorondron'ny fanondranana. Omeo ny tahirin-kevitra rehetra ilain'ny mpanjifa amin'ny fomba mety ary ataovy mazava tsara.
Ny marika sasany dia niara-niasa izahay